Ngwongwo nzacha na BM ọtụtụ - China BM ọtụtụ akpa na-enyocha ụlọ na-eweta ihe, –lọ ọrụ –Sffiltech
Home » ngwaahịa » Ngwunye Liquid » Ngwongwo nzacha na akpa nzacha
Multilọ nchekwa BM na-arụ ọrụ ọtụtụ akpa
mọsel oghe ụdị otutu akpa nyo ụlọ- BM usoro
- BM usoro mussel emeghe ụdị otutu akpa nyo ụlọ na-mepụtara na ndabere nke ngwa ngwa emeghe ụdị akpa nyo ụlọ, mma maka nhazi ụdị acid na alkali mmiri, ihe mgbaze na ụdị mmiri na-anọpụ iche. BM usoro mussel na-emeghe ụdị otutu akpa nzacha akpa ụlọ bolt na-eji iji mee ka ahụ mkpuchi kpuchie, na nrụgide dị elu. Na flange na akara mgbaaka na ngwaọrụ atọ pụrụ iche na-adọ aka na akpa aka, zere ịmịpụta akụkụ, mkpuchi dị elu na-agbakwụnye usoro mmeghe ngwa ngwa, wee nwee ike ịnọ n'akụkụ ọ bụla.
Iji nkọwapụta ogo dị elu dị elu iji hụ na corrosion zuru ezu na ntụkwasị obi kachasị;
Kwesịrị ekwesị maka nzacha na-agbapụta buru ibu, nwere ike ịnabata adịghị adị ndị ọzọ, dịkwa mma maka ogologo oge iji dochie akpa nzacha nke oge;
Enwere ike ịhọrọ nha nke 01, 02 nke akpa ihe ma ọ bụ nzacha;
Ntuchi anya nke anya, oru oma, aku na uba;
Elaborate imepụta usoro inyeaka, nke mere na mmeghe a dị mfe na mbọ, otu aka iji mezue ọrụ ahụ;
Nhọrọ nke ụdị dị elu 0 elastomer akara mgbaaka, arụmọrụ kacha mma na ndụ akara;
Belata downtime na nke kachasị mkpụmkpụ, kwalite nrụpụta na belata ụgwọ ọrụ;
A na-eji akụkụ mmiri dị ọcha igwe anaghị agba nchara, ezigbo nrụgide corrosion na anwụ ngwa ngwa;
ụdị asatọ, n'otu n'otu, akpa atọ, akpa anọ, akpa ise, akpa isii, akpa asatọ, akpa iri na abụọ, akpa iri na asaa, akpa iri abụọ na atọ.
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa: Koodu HS: 8421392200 maka mmiri nzacha akpa 304/316 mmiri
1. Ihe nkiri plastic n'ime na igbe osisi n'èzí
2. ukwuu n'ime pallets
3.We eme ngwugwu dika ihe ndi ahia choro
4.Anyị ji n’aka na ngwugwu anyị chebere ngwongwo nke ọma.
5.us na ngwongwo anyị dị n'akụkụ oké osimiri, ọ bụrụ na ọ bụ obere iwu, anyị nwekwara ike ịhọrọ ụgbọelu ma ọ bụ Ali egosipụta ma ọ bụ Fedex UPS DHL na ndị ọzọ
6.Anyị nwere ike ịnye akara OEM na akpa kpara ma ọ bụrụ na nnukwu buru ibu
7. Anyị nwere onye na-ebugharị anyị mana ọ bụrụ na ịnwere, anyị nwekwara ike iji onye na-ebugharị gị
Ụlọ nyocha akpa
Anyị nwere ọtụtụ mmiri igwe anaghị agba nchara n'ime ụlọ ọ bụla anyị na-elekwasị anya na obere nkọwa iji meziwanye njikwa mma.
Agba, biya, mmanụ ihe oriri, ọgwụ, ịchọ mma, kemịkalụ, mmanụ mmanụ, kemịkal akwa, kemịkal foto, mmiri, mmiri mmiri, ihe mgbaze, ụrọ, mmiri, ụlọ ọrụ, sigli, resin, ink, mmiri mbipụta, mmiri mkpofu, ihe ọ juiceụ juiceụ , mmanu oriri, waxes.
Sffiltech usoro igwe anaghị agba nchara akpa ụlọ bụ ụdị ihe eji eme akwụkwọ, obere olu, ọrụ dị mfe ma na-agbanwe, ịchekwa ike, arụmọrụ dị elu, arụmọrụ siri ike na akụrụngwa mgbapụta na-agbanye ike.
Sffiltech usoro igwe anaghị agba nchara ụlọ nzacha ụlọ: cylinder simplified, isi ihe nza ahụ na ngwa ngwa mmeghe, akpa ihe nchara na-eme ka ihe ndị bụ isi dịkwuo ike.
Ihe nzacha ahụ bụ ngwaọrụ mgbanye ụdị nrụgide, mmiri mmiri ahụ site na shei madoro n'akụkụ ọnụ ụzọ akpa na ngwaọrụ na-ewusi netwọkụ, ite mmiri nwere mkpa ogo ogo nke akpa ahụ nke nwere ike iru eru na akpa filtrate n'onwe ya bụ. ahụ na-ejide obere akpa akpa. Dochie akpa ihe ndozi dị mfe, na-enweghị ike ihe eji eme ihe.
Igwe anaghị agba nchara ụlọ
Nwere ike ịhụ njikwa niile na njikwa elu
Site na akụkụ na ngwaahịa anyị agwụchara, anyị nwara ike ọ bụla iji jikwaa njikwa, Achọrọ m ka ị bụrụ osisi anyị ga-eleta anyị maka ụlọ mmiri igwe anaghị agba nchara.
1, Onye nzubata akpa na akpa nzacha kacha ochie na china
2.Toro ihe niile aka anyị mere
3.Mgbe 1996 ụlọ ọrụ na mbupụ site na 2006
4.We abughi na ndi n’enye ihe kama anyi bu otu ebe ihe omuma ndi ulo oru nile a na-enweta
Akụrụngwa & teknụzụ
2, A na - anwale akụkụ anyị niile ma na - achịkwa nke ọma
Anyị chọrọ ka ọbịbịa gị bịa ebe a ịlele
3, Ihe kariri ahụmịị iri maka mbupụ
Anyị nwere ọtụtụ ndị ọrụ na ụwa.
1. Anyị ebugala site na 2006, ihe karịrị ahụmịhe iri maka ahịa mbupụ, yabụ anyị maara nke ọma ọnọdụ ọnọdụ ọrụ si mba ofesi
2.Anyị bụ ndị ọrụ mmepụta:
1.1 factorylọ ọrụ anyị malitere site na 1996, ọnye nọmba mbụ dị na azụmahịa filtration, yabụ, onye ọrụ anyị bụ onye ọzọ
karịa ahụmihe iri na anọ, anyị maara akpa ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike ịnye gị eziokwu
1.2 filterlọ nchekwa akpa anyị bu akpukpo mmiri 304/316 nwere ihe karịrị afọ iri na ise.
1.3 Ebe nchekwa akpa anyị 304/316 na-eme ka mmiri na-eme ka ọkaibe nwee ihe karịrị afọ iri na isii.
1.4 Anyi maara ahia china filtration nke oma, ngwongwo anyi di anyi no na ulo akpa china,
yabụ anyị nwere ike ịnye gị ihe ndozi akpa kachasị mma, nke nwere ike ime ka ị zọpụta m ma nweta ọmarịcha mma ọrụ.
1.5 Anyị na-elekwasị anya na ezigbo akpa nzacha akpa ụlọ. Na akụrụngwa niile dị mkpa n'otu ụlọ ọrụ.
1.6 Anyị na-anwale akụkụ niile n’otu n’otu tupu ebufe n’igwe eji teknụzụ dị elu
1.7 Anyị nwere ọrụ azụmaahịa ike, otu ọrụ kacha mma maka gị.
1.8 Anyi na-anabata oke iwu ọ bụla maka ọrụ dị mma karịa ndị ahịa anyị.
1.9 Onye anyị n’ichepụta ụlọ bụ onye obodo, ya mere ngwongwo anyị kwụsiri ike
2.0 Anyị nwere ngwaahịa ịlele maka usoro ọzọ, yabụ ị nwere ike nweta data gị n'oge ọ bụla ị bịakwutere anyị maka usoro ọzọ.
3.Low MOQ: ụlọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa akpa akpa akpa, yabụ anyị nwere ike ịme ọnụọgụ ọ bụla
ịtụ maka gị.
4.Low price: Anyị na-agba mbọ ike anyị iji jide n'aka na ọnụahịa anyị bụ nke kacha ala ebe ọ bụla, ọnụahịa maka ọnụ ala kacha mma maka gị ka mma
na-emeso ihe niile oge. Anyị dị mpako inyere gị aka ịchekwaa ego na ngwaahịa ịchọrọ.
5.Ọdịmma dị mma na asambodo anyị gafere FDA, MSDS, ISO9001 na ule ndị ọzọ.
Ngwaahịa na-emepụta anyị na-eji igwe kachasị mma arụpụta ụlọ mmiri anaghị agba nchara
Igwe anaghị agba nchara mmiri nzere ụlọ
Igwe anaghị agba nchara nke mmiri nchara eme ụlọ ọrụ
Igwe anaghị agba nchara mmiri nchara ụlọ ngwugwu mmiri